Ukuvakasha kwe-Eastern Splendor | Shayela ku-91-993.702.7574 Ukubhuka.
Hlola inhlanhla enhle yemvelo nge-trek ezifundeni ezisenyakatho-mpumalanga ye-India. I-Eastern Splendor Tour inikeza uhambo olufanele ukufeza isifiso sakho sokuphumula futhi sibe nesisasa ngesikhathi esifanayo. I-Kalimpong neDarjeeling yimizi emibili ehlala e-Himalaya ye-North-Eastern ingxenye yeNdiya. Bobabili babenomlando ofanayo - okokuqala babe ngabakwa-chogyals baseSikkim bese kamuva beyingxenye yeBrithani India. Kukholelwa ukuthi ubuhle bangempela baseNdiya buhlala esifundeni esenyakatho-ntshonalanga. Ukuvakasha kwe-Eastern Splendor kuzokuthatha emagqumeni omlingo kanye nesimo sezwe eliphelele, ukubukwa okuphefumulayo kwe-Himalayas, indawo ehlelekile, isimo esihle sezulu namasiko ahlukahlukene eNyakatho-East India okuheha abavakashi emhlabeni wonke. Lapho ukhuluma North East India, awuphuthelwa ukungeza i-Darjeeling ne-Kalimpong ohlwini lwakho njengoba bezakhela izivakashi ezimbili ezithandwa kakhulu. Njengoba lesi sifunda sifaneleka ukutshala itiye, abaseBrithani basungula iDarjeeling njengesikhala sezintaba kanye nesakhiwo sehlobo. Ngemva kokufakwa kweTibet eChina, ababaleki abaningi baseTibet bahamba lapha. Ngenxa yalokho, lo muzi ugcwele ingxube yezakhiwo zobuKoloni namaBuddha. Ungabona izindlu ezithandekayo zamaViltori zesikhathi esidala, nama-pagodas nama-monasteries, namagquma namasimu azungezile. I-Eastern Splendor Tour izokuvumela ukuthi uzwe okuyisisekelo sangempela salendawo. Kungakhathaliseki ukuthi uhlela uhambo nomndeni wakho, abangane noma uhambo olulodwa, i-Eastern Splendor Tour izokhathalela uhambo lwakho.
Uhambo lwethu lweNorth East Tour luhlanganisa ukuhambela izindawo ezikhangayo ezikhangayo ezifana neTiger Hill, iCheth Car Ride, i-Ghoom Monastery, i-Natural History Museum, i-Hanuman Mandir ne-Peace Pagoda. Hlola indlela yethu eningiliziwe yolwazi oluthe xaxa mayelana nephakheji lokuvakasha.
UKALIMPONG - UDARJEELING
Uhlelo lwe-03 Nights | Ikhodi Yokuvakasha: 025
USUKU LWE-01: I-ARRIVAL NJP STATION / (IXB) IBAGDOGRA AIRPORT - UKALIMPONG
Lapho ufika e-NJP Railway Station / (i-IXB) i-Bagdogra Airport, (500Ft / 150Mts) uzothola ummeleli wethu wangakini oyokusiza ukugibela imoto yakho ku-Kalimpong (3937 Ft / 1200 Mts, 75 Kms / 03 kuma-04 Hrs ), Hlola kanye nobusuku ehhotela.
DAY 02: KALIMPONG - DARJEELING
Namuhla emva kokudla kwasekuseni kuhambela izintaba zaseDello, ikhaya likaDkt Graham, i-Flower Nurseries, i-Jang-Dong-Palriffo Brang noDurbin Dara Hills. Dlulisela ku-Darjeeling (7380 Ft / 2250 Mts, i-70 Kms / 03 kuya ku-04 Hrs), ebusuku ku-Hotel.
Ukuhamba ekuseni kuTiger Hills (8364 Ft / 2550 Mts ezungeze i-4 AM) ukubuka ukuphuma kwelanga ngaphezu kwe-Kanchendzonga Peak (ngokuya kwesimo sezulu esicacile). Ngesikhathi sokubuyela emuva kwendwendwe ye-Ghoom, i-Batasia Loop. Ngemuva kokudla kwasekuseni kuhamba ngesikhatsi sezinsuku eziyisikhombisa sokubuka indawo yethempeli laseJapane, ukuthula i-pagoda, i-Padmaja Naidu Himalayan i-Zoological Park ne-Himalayan Mountaineering Institute (Ivaliwe ngoLwesine), Ukuqothula ne-Gombu Rock, Isikhungo Sosizo Sokuzisiza SaseTibetan (Kuvaliwe ngeSonto) ne-Tea Estate . Ngobusuku ehhotela.
DAY 04: DARJEELING - NJP RAILWAY STATION / (IXB) IBAGDOGRA AIRPORT
Dlulisela ku-NJP Railway Station / (IXB) i-Bagdogra Airport (110 Kms / 04 kuya ku-05 Hrs) ukuze uxhumane nokuqhubeka kwakho.